The Ab Presents Nepal » घर नजिकै शा’रीरिक स’म्पर्क गरिरहेका बेला दाजुले बहिनीलाई देखेपछि….
घर नजिकै शा’रीरिक स’म्पर्क गरिरहेका बेला दाजुले बहिनीलाई देखेपछि….
बहिनीसँग शा’रीरिक सम्बन्ध राखेको आरोपमा चितवनमा एक युवाले साथीको ह त्या गरेका छन् । पटियानीका यमकुमार महतोले बहिनीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको भन्दै आफ्नै साथी भरतपुर–२७ का अविनाश महतोको गत १२ मंसिरमा ह त्या गरेको रहस्य खुलेको हो । यमकुमारले अन्य साथीको समेत सहयोगमा अविनाशको ह त्या ग रेपछि खा ल्डो ख नेर श व पुरेका थिए ।
मृ तक अविशानका बाबु कालीरामले छोरा हराएका भन्दै जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पटियानी नजिकै खोला किनारमा अविनाशको श व सडेको अवस्थामा फेला पारेपछि घटनाको रहस्य खुलेको हो ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न यमकुमारसँगै उनका साथीहरु दीपेन्द्र महतो, वनोद महतो र विजय महतोलाई पनि पक्राउ गरेको छ । यमकुमारकी बहिनी र मृ तक अविनाशबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आफूहरु रातिको समयमा घर नजिकै शा रीरिक स म्पर्क गरिरहेका बेला दाजुले देखेपछि कु टेर अविनाशको अ त्या भएको बयान युवतीले दिएकी छन् ।साथीहरु धन बहादुर महतो, सुकराम महतो र अविनाश गरी ४ जना नयाँ पटिहानी चोकको ग्रिन चिल्ली रेस्टुरेन्टमा बसेर २ वटा बि यर र १ प्लेट सुकुटी खाए । खाइसकेर सुकराम र अविनाश पर्साढापस्थित घर जाने भन्दै हिँडे । चिसोका कारण डम्म हुस्सु लागिसकेको थियो ।
अलि पर पुगेपछि सुकरामले अविनाशलाई देखेनन् । पछाडि आउँदै होला, हुस्सुले नदेखिएको होला भन्ठाने । त्यति चासो गरेनन् । सरासर आफ्नो घर गए र खाना खाएर सुते । तर अविनाश भने पुरानो पटियानीतिर लागिसकेका थिए ।साँझ करिब ७ः४२ बजे पटियानी पुगेका अविनाशले लगातार ४ पटक यमकुमारको बहिनीलाई फोन गरे । अन्तिममा यमकुमारको बहिनीको फोन उठ्यो । फोनको क्रममा ‘म हिजो तिमीलाई भेट्ने आशामा राती तिम्रै घरमा बसें । तर, तिमीसँग भेट भएन । आज म तिम्रै घर नजिकै छु जसरी नि भेट्न आउ’ भने ।
राति करिब ९ बजेतिर यमकुमारको बहिनी पिसाब फेर्ने बहानामा बाहिर निस्किइन् । अविनाशलाई घरको पछाडी उभिएका देखेर उनी सिधै त्यहाँ पुगिन् ।अविनाशले उनलाई हातमा समातेर नजिकै पराल राखेको ठाउँमा लगे । लगत्तै शा’रीरिक सम्पर्क गर्न खोजे । खासखुस गरेको आवाज केटीको दाइ दीपेन्द्रले थाहा पाए ।नयाँ बन्दै गरेको घर थियो । झ्याल थिएन । दीपेन्द्रले उनीहरुलाई देखे । दीपेन्द्र एक्कासी त्यहाँ पुगेर अविनाशलाई समातेर कु’ट’पि’ट गर्न थाले ।कु’ट’पि’ट गरेको खबर गाउँभरी फैलियो । अनि यमकुमार, विनोद, विजय पनि पुगे र सबै मिलेर नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट गरे । ‘कु’ट’पि’ट’कै क्रममा अविनाशको निधन भयो ।